WAR DEG DEG AH:Ciidamada Somaliland oo hada qabsaday Hadaaftimo & Deegaano hor leh oo ay afka saareen “Wasiirada Badhan ku sugan maxay yeeli doonaa” – Puntlandtimes
WAR DEG DEG AH:Ciidamada Somaliland oo hada qabsaday Hadaaftimo & Deegaano hor leh oo ay afka saareen “Wasiirada Badhan ku sugan maxay yeeli doonaa”
March 14, 2019 Puntland PL
Wararka Warsidaha Puntlandtimes.com uu hada ka helayo degmada Hadaaftimo ee gobolka Sanaag ayaa sheegaya in ciidamadii ugu badnaa ee Somaliland ay goor dhoweyd la wareegeen gacan ku haynta deegaankaasi.
Gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa mar qudha lagu waabariistay degmada Hadaaftimo, waxaana ciidamadani ka tirsan Somaliland ay awood kula wareegeen deegaankaasi.
Shacabka deegaanka ayaa durbaba bilaabay banaan baxyo xoogan oo ay kaga soo hor jeedaan imaanshaha Hadaaftimo ee ciidamada Somaliland, waxaana jidadka magaalada ay shacabku ku gubeen taayiro waa weyn.
Dadka deegaanka oo raali aan ka ahayn imaanshaha ciidamada Somaliland ee Hadaaftimo ayaa waxa ay ku dhawaaqayaan erayo lidi ku ah ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysa.
Dhanka kale ciidamadani ayaa la sheegay in qaybtood ay ku wajahan yihiin degmada Xingalool iyo qaybo kamid ah gobolkaasi Sanaag oo haatan ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa Puntland iyo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Denni oo iyaguna booqasho ku tagay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag kadib la wareegitaankii deegaanka Yubbe oo ciidamada Somaliland ay la wareegeen maalmo ka hor.
Xiisadaha u dhaxeeya dhinacyada Puntland iyo Somaliland ayaa sii xoogaysanayey muddooyinkii ugu dambeeyey, waxaana ciidamada Somaliland ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Sanaag.
Wixii kusoo kordha warkaasi kala soco WWW.PUNTLANDTIMES.COM
maxaa doqon jaahila adduunka jooga supxaanalaahgaas kiniini deg idingana waxaad la niicleedihiin kiniini baa ubaahantihiin
FAALO KU SABSAN SOMALILAND & PUNTLAND IYO XISADA TAGAN.
Somaliland waxay uqab sameysantahay sistam Dawladed,mesha puntland uqaab sameysantahay Qaab Qabali ah,somaliland waxay dhisatay Ciidan Qalabeysan oo hubkodu udhanyahay nockasta,hase ahate puntland malaha ciidan Qalabaysan oo Dagal udiyar ah,marka wax dhacan aya laradiya ciidan maleshiyo ah oo Qaaab Qabiil lugu ururiyo,Cidamada somaliland waxay leyihin Sarakiil Aqoon sare leh oo shaqada udiyarasan,waxay watan baburta Tignikada loyaqan & kuwa gashaman.
Kenya Oo Kordhisay Qarashka Qareenadda Ka Difaacaya Dacwadda Xuduud-Baddeedka Somalia